काठमाडौंमा भारतीय शैक्षिक मेला हुने
काठमाडौं, २९ जेठ । काठमाडौंमा ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ आयोजना हुने भएको छ ।
११ विद्यार्थी संगठनद्वारा लोकसेवा अध्यक्षलाई चेतावनीसहितको ज्ञापन (ज्ञापनपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ जेठ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट ११ विद्यार्थीहरु संगठनहरुले संयुक्तरुपमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलाई चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सप्तरी, २९ जेठ । शम्भुनाथ नगरपालिका ५ तारखानास्थित सडकमा स.७ प १५८९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
वीरगञ्ज–विराटनगरबाट भारतको कोलकत्ता–हल्दियासम्म नेपालको रेल
काठमाडौ, २९ जेठ । नेपाल–भारतबीच नेपालको रेल वीरगन्ज र विराटनगरबाट भारतको कोलकत्ता÷हल्दियासम्म संचालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
पत्रकार महासंघ रौतहटका अध्यक्ष साहको निलम्बन फुकुवा
रौतहट, २९ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद साहको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।
सांसद यादवको प्रयासले रंगशाला मर्मत तथा कबड हल निर्माणका लागि ७ करोड
वीरगंज, २९ जेठ । समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवम प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद प्रदिप यादवको निरन्तर प्रयासले गर्दा नारायणी रंगशालालाई मर्मत सम्भार तथा कबड हल निर्माणका लागिी खेलकुद मन्त्रालयले ७ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
वीरगंजबाट ४ खर्ब लिने, बजेट दिने बेला कञ्जुस्याई किन ?
वीरगन्ज, २८ जेठ । समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद प्रदिप यादवले राज्यले वीरगन्जसँग कर मात्र असुल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बाल गायक प्रितम इटहरी उपमहानगरका सद्भावना दूत
इटहरी, २८ जेठ । इटहरी उपमहानगरले चर्चित बाल गायक प्रितम आचार्यलाई बाल सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ ।
लोकसेवाको विज्ञापन नै रद्द गर्न निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य : साझा विवेकशील
काठमाडौं, २८ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा विवेकशील पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बाँकेमा जनमत पार्टीको कार्यकर्ता नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न
नेपालगन्ज, २८ जेठ । जनमत पार्टीले बाँकेमा एकदिने कार्यकर्ता नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ ।
मधेशी एसोसिएसनद्वारा कोईलाडी माविमा बृक्षारोपण
राजविराज, २८ जेठ । विश्व वातावरण दिवस पारेर मधेशी एसोसिएसन अमेरिका र डिप्लोमा ईन्जिनियरिंग एसोसिएसन नेपाल( डिन) ले वातावरण संरक्षण गर्न कोईलाडीमा बृक्षारोपण गरेको छ ।
‘समाचार किल गर्ने शर्तमा ल्यापट लिएको छैन’
उदयपुर, २८ जेठ । उदयपुरका पत्रकारहरुले समाचार किल नगर्ने शर्तमा ल्यापटप लिएको एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन् । सोमबार पूर्व प्रेस चौतारी र प्रेस सन्टर र प्रेस युनियन उदयपुरले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
जनकपुरधाम, २७ जेठ । प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम बुहमतले पारित भएको छ ।
युवाहरु भैंसीपालनतर्फ आकर्षित
कपिलवस्तु, २७ जेठ । बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ४ का मोर्माका युवाहरु कृषक फर्म स्थापन गरी भैंसीपालन व्यवसाय संचालनमा लागेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतद्वारा दोस्रो किस्ताको रकम प्रदान
काठमाडौं, २७ जेठ । भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्तावापतको रकम १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
आफ्नै श्रीमतीलाई इँटा प्रहार गरी हत्या गर्ने अभियोगमा पक्राउ
कपिलवस्तु, २७ जेठ । आफ्नै ३९ वर्षीया श्रीमती गीता चौधरीलाई इँटा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा वाणगंगा नगरपालिका १ बुङ्ची बस्ने ४९ वर्षीय अगमान चौधरीलाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २७ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन अन्ततः खारेज हुने भएको छ ।
बेलवामा पक्की ढलान सडकको शिलान्यास
वीरगञ्ज, २७ जेठ । वीरगञ्ज महानगरपालीका वडा नम्बर ३१ बेलवामा निर्माण हुन लागेको पक्की ढलान सडकको एक कार्यक्रमका विच संघीय सांसद प्रदिप यादवले शिलान्यास गरेका छन् ।
नेपाल–भारत सीमामा १७९ नयाँ स्तम्भ
विराटनगर, २७ जेठ । प्रदेश १ स्थित नेपाल–भारत सीमामा १ सय ७९ नयाँ स्तम्भ निर्माण गरिएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्षको सद्भावना दूतमा भारतीय बाबा
काठमाडौं, २७ जेठ । भारतीयमूलका योगगुरु बाबा स्वामीलाई नेपाल भ्रमण वर्षको सद्भावना दूतमा नियुक्त गरिएको छ ।
कृष्णानगर उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
कपिलवस्तु, २७ जेठ । कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णानगर उद्योग वाणिज्य संघको १०औं वार्षिक साधारण सभा गुरु शरण सिंरको अध्यक्षतामा कृष्णानगर उद्योग बाणिज्य संघको सभा हालमा सम्पन गरिएको छ ।
पर्सामा भीषण वर्षा हावाहुरी र चट्याङले १ जनाको मृत्यु
वीरगंज, २७ जेठ । पर्सामा आइतबार साँझ आएको भीषण वर्षासँगै हावाहुरी र चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
रुपन्देही, २६ जेठ । बुटवल बस्ने १५ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बुटवल उपमहानगरपालिका ११ बुद्धनगर बस्ने ३७ वर्षीय बिष्णु प्रसाद कुवरलाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
दुई मोटरसाइकल जुध्दा एकको मृत्यु
मोरङ, २६ जेठ । मोरङमा दुई मोटरसाइकल एक आपसमा जुध्दा एकको मृत्यु भएको छ ।
गुडिरहेको ट्याक्टरमा चढ्न खोज्दा लडेर मृत्यु
कैलाली, २६ जेठ । लम्की लुहाम नगरपालिका ५ सौरीस्थित सडकमा गुडिरहेको अनटेष्ट लेखेको ट्याक्टरमा चढ्न खोज्दा सोही ठाउँ बस्ने ४० वर्षीया भुमिसरा नेपालीको अचानक भुइँमा खसेर आइतबार बिहान घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।